Mormonisma - Wikipedia
Ny mormonisma dia ny foto-pampianaran' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany. Izany foto-pampianarana izany dia ahitana ny Teti-pamonjena izay misy vondron-dalàna voalamina, ordonansa mandrakizay, ireo lalàna ireo no rafitra entin' Andriamanitra mitantana ny fanjakany. Ny Olomasin' ny Andro Farany dia mino ny fisian'ny Teti-pamonjena izay ahafahan' ny olona mendrika hiverina eo anatrehan' Andriamanitra. Atao hoe "Filazantsaran' i Jesoa Kristy" ny teolojian'ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany. Fampianarana avy amin' ny fanambaràn' i Jesoa Kristy izay miendrika firafetan-dalàna sy didy mandrakizay izany ka ny olona izay manaraka an-tsakany sy an-davany an' izany dia mahazo antoka fa hiditra eo amin' ny fanatrehan' Andriamanitra. Ireo lalàna sy didy ireo no lamim-pitondrana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho voavonjy avokoa ao amin' ny Fanjakam-boninahitra ny olona rehetra fa tsy voatery ho ao amin' ny Fanjakan' ny Lanitra.
1.1 Ny fiainana miaraka amin' Andriamanitra talohan' ny feteza-maty
1.2 Mandao ny fanatrehan' Andriamanitra
1.3 Mifandray amin' Andriamanitra
1.4 Fiezahan' ny Olomasina ho amin'ny tonga lafatra hatrany
1.5 Ny fianakaviana mandrakizay
1.6 Ny asa ao amin' ny Tempoly sy ny tantaran' ny fianakaviana
1.7 Ny fiainanana aorian' ny fahafatesana
2 Ny amin' Andriamanitra
3 I Jesoa Kristy
3.1 Ilay Voalohan-teraka tao amin'ireo zanaka fanahy
3.2 Zanany lahitokana kosa ao amin'ny nofo
3.3 Ny fiaviany indray dia ilaina amin' ny Famonjena
Ny fiainana miaraka amin' Andriamanitra talohan' ny feteza-matyHanova
Ny olombelona rehetra dia voafidy avy ao amin'ny fiainana talohan'ny feteza-maty mba hotonga ety an-tany sy mba hanandrana ny fiainan'ny vatana ara-nofo sy taolana ary mba hahazo ny hatsaran-toetra kristiana alohan'ny hiverenany eo anatrehan'Andriamanitra.
Mandao ny fanatrehan' AndriamanitraHanova
Ny Fahalavoan'i Adama sy i Eva dia dingana tsy maintsy nilaina amin'ny fahaterahan'ny zanaky ny fanahin'ny Ray. Raha tsy teo io dingana io dia tsy ho nanan-taranaka i Adama sy i Eva ary tsy ho nahalala ny tsara sy ny ratsy na koa ny atao hoe fiainana mandrakizay any aoriana, araka ny voasoratra ao amin'ny Bokin'i Nefia (2Nefia 2.22-25). Tsy zava-dratsy ny fahalavoan'i Adama sy i Eva.
Mifandray amin' AndriamanitraHanova
Fiezahan' ny Olomasina ho amin'ny tonga lafatra hatranyHanova
Ny fianakaviana mandrakizayHanova
Ny asa ao amin' ny Tempoly sy ny tantaran' ny fianakavianaHanova
Ny fiainanana aorian' ny fahafatesanaHanova
Misy ny fanomezana dingam-pisondrotam-boninahitra: amin'ny fitsarana ny olona tsirairay dia omena ny iray amin'ireo dingam-boninahitra telo ireo, arakaraka ny safidiny tao amin'ny fotoana nahamety maty azy (eto an-tany) sy any an-koatra. Ireto ireo dingana na ambaratongam-boninahitra ireo: any ambanin'ny tany (telestialy), eto ambonin'ny tany (terestrialy) na any an-danitra (selestialy). Teny am-panoharana ireo.
Ny amin' AndriamanitraHanova
Hafa tsy tahaka ny an'ny fiangonana katolika sy ortodoksa ary protestanta ny fiheverany an' Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina izay lazainy fa samy Andriamanitra.
Ao amin'ny Olomasin' ny Andro Farany dia ny Ray no matetika atao hoe Andriamanitra. Mifanahaka ny Ray sy ny Zanaka (Jaona 14.6-7). Andriamanitra no mpanapaka izao rehetra izao. Mitoetra any an-danitra Andriamanitra (Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 20.17).
Ao amin'ny teolojia mormona, Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Zanany ary ny Fanahy Masina dia zavatra telo miavaka tsara sady misaraka ara-batana tsara nefa miray tanteraka raha ny amin'ny tanjona hamonjena ny olombelona no heverina.
I Jesoa KristyHanova
Ilay Voalohan-teraka tao amin'ireo zanaka fanahyHanova
Tamin'ny dinidinika tao an-danitra dia i Jehovah, izay tsy iza fa i Jesoa Kristy, ilay voalohan-teraka tao amin'ireo zanaka fanahy, dia vonona ka nidina tety an-tany hanolotra ny ainy hanaisotra ny fahotan' izao tontolo izao. Hoy izy ao amin'ny Bokin'i Mosesy: "Ray ô, hatao anie ny sitraponao ary anao mandrakizay ny voninahitra" (Mosesy 4.2).
I Losifera kosa dia te-hanery ireo zanaky ny Ray hanao ny sitrapon'izy Losifera. Rehefa nohenoin'Andriamanitra Ray ireo zanany roalahy dia hoy izy: "Halefako ilay voalohany" (Abrahama 3.27). Noho izany dia i Jesoa Kristy no voafidy ho Mpanavotra .
Zanany lahitokana kosa ao amin'ny nofoHanova
I Jesoa Kristy no ivon'ny teolojia mormona: ny fahaterahany, ny fiainany, ny sorom-panavotana nataony ary ny fitsanganany amin'ny maty. Ny sorom-panavotana nataon'i Jesoa Kristy dia trangan-javatra lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny Zanak'olombelona. Noho i Kristy nanana fiainana tonga lafatra no nahatonga azy ho mendrika ny hanolotra ny ainy ho vidim-panavotana amin'ny fahotan'ny olombelona rehetra. Ny sorom-panafahana no nahatanteraka ny finoana an'i Kristy sy ny famonjena nataony.
Ny Olomasin'ny Andro Farany dia manambara fa i Jesoa no Voalohan-teraky ny Ray ao amin'ny fanahy fa Zanany lahitokana kosa ao amin'ny nofo. Izy no Kristy na Mesia, izany hoe ilay "Voahosotra". Izy ilay Andriamanitry ny Testamenta Taloha, dia i Jehovah izany (Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 110.3-4) izay voalahatra mialoha ho amin'izany antso lehibe izany talohan'ny Famoronana izao tontolo izao. Izy no namorona ny Tany sy izay rehetra eo aminy, araka ny fitarihan'ny Ray. Naterak'i Maria tao Betlehema izy ary niaina tsy nisy fahotana sady nanatanteraka ny Fanesorana amin'ny fomba tongalafatra ny fahotan'ny olombelona rehetra tamin'ny fandatsahany ny rany sy tamin'ny nanolorany ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana.
Nitsangan-ko velona izy mba hahazo antoka ny fitsanganan'ny olombelona rehetra amin'ny maty amin'ny farany. Tamin'ny alalan'ny vidim-panavotana nataony sy ny fitsanganany ho velona no hahafahan'izay mibebaka amin'ny fahotany sy mankato ny didin'Andriamanitra hiaina mandrakizay miaraka amin'i Jesoa sy amin'ny Ray.
Ny fiaviany indray dia ilaina amin' ny FamonjenaHanova
Ny fiaviany eto amin'izao tontolo izao dia ilaina mba handovan'ny olombelona ny Famonjena, ary ny fiainany dia ohatra tongalafatra ho an'ny fomba fiainan'ny olombelona. Ny vavaka sy ny tso-drano ary ny sakramentan'ny asam-pisoronana dia atao amin'ny anarany.
I Jesoa Kristy no mpahary, mpamonjy ary Andriamanitry ny tany manontolo. Ho avy amin-kery sy voninahitra izy hanjaka eto an-tany mandritra ny arivo taona, ary amin'ny andro farany dia izy no ho mpisolovava rehefa hitsara ny olombelona rehetra Andriamanitra Ray (Guide des écritures, p. 107.).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mormonisma&oldid=1001312"
Dernière modification le 10 Febroary 2021, à 14:38
Voaova farany tamin'ny 10 Febroary 2021 amin'ny 14:38 ity pejy ity.